लकडाउनमा पालेको काम गर्दै बिब्यस अध्यक्ष – Yug Aahwan Daily
लकडाउनमा पालेको काम गर्दै बिब्यस अध्यक्ष
युग संवाददाता । १२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १४:०८ मा प्रकाशित
1406 पटक हेरिएको
तुलराज पाण्डे/ कालीकोट, १२ बैशाख ।
कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित जन जीवन मा.वि. ताडिका विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार शाही (क्षितिज) ले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेका छन् । लकडाउनको समयमा बिद्यालयमा बगैंचा निर्माण तथा रङरोगन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । सोही ठाउँका स्थानिय चन्द्र प्रसाद पाण्डे र गोविन्द देवकोटासंग मिलेर बिद्यालयमा सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न काम गर्दै आएका छन् ।
नयाँ बि.ब्य.स. गठन भएको २ महिना पूरा नहँुदै विश्वमहामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारणले लकडाउन भएको हँुदा थप काम गर्न नपाएकोमा पछुतो मान्दै सक्रियता जनाएका छन् । यो समय घर भन्दा बाहिर ननिस्किने हो तर घर नजिकैको बिद्यालयमा सतर्कता अपनाई सो कार्य गर्दै आएको बताए । ‘हाम्रो समाजमा बिद्यालयको अध्यक्ष भएपछि प्र.अ.ले बैठक बोलाउँदा रजिस्टरमा हस्ताक्षर गर्नका लागि मात्र बिद्यालय आउने चलन थियो त्यसैले होला मैले काम गर्दा स्थानीयले अध्यक्ष भएर किनकाम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ’ उनको अनुभव थियो ।
विद्यालयमा निर्माण भएको बगैँचामा फुल रोफ्ने, पानी चार्ने, साँझ बिहान रेख्देख गर्ने जस्ता बिद्यालयको पालेले गर्ने काम अध्यक्ष शाही स्वयम् आफैले गर्दै आएका छन् । विद्यालयको कक्षा–१ देखि ९ सम्म नतिजा पनि अबको केही समयमा निकाल्ने प्र.अ. तेज बहादुर शाहीले बताए । विद्यार्थीलाई घरमानै बसेर पुरानो किताबलाई अध्ययन गर्दै गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।